'बाला' फिल्म समीक्षा : शारीरिक कमीमाथि बनेको अर्थपूर्ण कमेडी
हाम्रो समाजमा महिलाहरूले शरीरका विषयमा अनेकौं टीकाटिप्पणी सुन्नुपर्छ । काली महिला वा मोटी महिलाले जिन्दगीभरि अपमान सहनुपर्ने हुन्छ । निर्देशक अमर कौशिकको बाला फिल्ममा चाहिँ युवकहरूको तालुखुइलेपनाको कुरा उठाएका छन् । निर्देशकले चतुर्‍याइँपूर्वक कपाल झर्ने समस्यालाई डील गरेका छन् अनि काली युवतीप्रति समाजको संकीर्ण दृष्टिकोणलाई पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।
बाल्यकालमा बालमुकुन्द अर्थात् बाला (आयुष्मान खुराना) को कपाल घना र रेशमी थियो अनि उनी कपाल खेलाएर बस्थे । तर २५ वर्ष हुँदासम्म उनको घना कपाल झर्न थाल्छ । तालुखुइले बन्दै जाँदा उनकी बाल्यकालदेखिकी प्रेमिकाले पनि छोडेर जान्छिन् । समाजले उनको मजाक उडाउन थाल्छ । जागिरमा पनि उनी घटुवामा पर्छन् । उनको बिहा हुन सक्दैन । उनी कपाल फेरि उमार्नका लागि अनेकौं उपाय अपनाउँछन्, चाहे त्यो घिनलाग्दो उपाय नै किन नहोस् ।
उनकी विद्यालयकालकी साथी लतिका (भूमि पेडनेकर) ले उनलाई सत्य बताउन खोजेपनि उनी लतिकासँग चिढिन्छन् । लतिका एक वकिल हुन् र काली भएका कारण दुत्कारिन्छिन् । तर आफूलाई कहिले पनि हीन अनुभव गर्दिनन् ।
उता कपाल उमार्न सबै उपाय अपनाएका बाला अन्ततोगत्वा हेयर ट्रान्सप्लान्टका लागि तयार हुन्छन् । उनलाई मधुमेहका कारण यो समस्या भएको हुन सक्ने थाहा लाग्छ । हताश भएपछि उनी आफ्ना पिता (सौरभ शुक्ला) को विग लगाउन थाल्छन् । अनि उनको आत्मविश्वास फर्किन्छ ।
त्यही आत्मविश्वासको बलमा उनी टिकटक स्टार परी (यामी गौतम) सँग प्रेम अभिव्यक्त गर्छन् । बिहेसम्म कुरा पुग्छ तर परीलाई बाला तालुखुइले हो भन्ने थाहा हुन्न । बालाको सत्य कुरा थाहा पाएपछि परीको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? बालाले आफ्नो तालुखुइलेपनालाई स्वीकार गर्छ ?
बालामा निर्देशक कौशिकले यस विषयलाई गहिरो गरी प्रस्तुत गरेका छन् । विषयको गहिराइमा पुगेर उनले यसलाई मेलोड्रामाटिक नबनाई कमेडीको फ्लेवर दिएका छन् ।
कानपुरमा शूटिङ गरिएको फिल्ममा अभिनेताहरूले कानपुरी बोली बोलेका छन् र त्यो रमाइलो सुनिन्छ । पहिलो हाफ निकै रमाइलो छ तर दोस्रो हाफमा भाषणबाजी छ । क्लाइमेक्सले सुन्दर सन्देश दिन्छ ।
काली युवतीका रूपमा भूमिको मेकअपमा राम्रो ध्यान पुगेको पाइएन ।
लेखक नीरन भट्टको वान लाइन संवाद ‘हेयर लस हैन, आइडेन्टिटी लस भइरहेको छ मेरो’ गजबको सुनिन्छ ।
सचिन–जिगरको संगीतमा बादशाह, शाल्मली, गुरदीपको डन्ट बी शाय गीत दामी बनेको छ ।
आयुष्मान खुरानाले शानदार अभिनय गरेर आफू जस्तोसुकै भूमिकामा फिट भएको सन्देश दिएका छन् । तालुखुइले पात्र छनोट गर्दा इमेजमा धक्का पर्ला भनेर उनले हिचकिचाएको देखिँदैन । भूमिका छान्न साहस देखाउनुका साथै उनले त्यसलाई न्याय समेत गरेका छन् । यामी गौतमले टिकटक स्टारका रूपमा राम्रो अभिनय गरेकी छन् अनि अत्यन्तै सुन्दर पनि देखिएकी छन् । भूमि पेडनेकर पनि फरक फरक भूमिका गर्न डराउँदिनन् । साँड की आँखमा बूढी महिला बनेकी भूमि यस फिल्ममा काली युवती बनेकी छन् र भूमिकामा छाएकी छन् ।
अन्य कलाकारहरू सौरभ शुक्ला, जावेद जाफरी, सीमा पाहवा, दीपिका चिखलिया र अभिषेक बनर्जीले पनि राम्रो अभिनय गरेका छन् ।
कलाकार : आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, यामी गौतम, सौरभ शुक्ला आदि
बलिउडमा जातभातको लडाइँ : कंगनाले खोलिन् मोर्चा
दीपिका पछि सारासँग सवाल–जवाफ गर्दै एनसीबी, थप रह...